TÜDEMSAŞ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကို (TÜDEMSAŞ), 12 58030 TÜDEMSAŞ Sivas / တူရကီ: KADIBURHANET MAHALLESİစက်ရုံလမ်းပေါ်မှမလုပ်ခဲ့တယ် Sivas 58030 Türkiye + Google Maps ကို
ယ်ယူရန် Horizontal Lifeline လိမ့်မည်တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC (TÜDEMSAŞ) အက်ဥပဒေအမှတ် 4734 စားသုံးမှုလိုင်းစနစ်ကအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal နှင့်ဒေါင်လိုက် Lifeline အလုပ်လုပ် (TÜDEMSAŞ) 17 / 05 / 2016 တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ပြုသောအမှုအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်အသက်သွေးကြောအလုပ် ရေပြင်ညီဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆိုတာဘာလဲ lifeline (TÜDEMSAŞ) သည်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 171611 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4699-4683 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov: ihale@tudemsas.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် TR / ECAP / 2-တစ်ဘာသာရပ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ခေါင်မိုးဘောင်များအတွက် OHS အစီအမံအတွက်ကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းစက်ရုံဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် Lifeline ထားကြပါတယ် 05 / 08 / 2014 TULOMSAS အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး TULOMSAS စက်ခေါင်းစက်ရုံဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ဘဝအောင်လိုင်းများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်၏ခေါင်မိုးများအတွက် OHS အစီအမံမူဘောင်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အောင် VERTICAL ၏ဘောငျအတှငျး Osh အရပ်ပမာဏ HORIZONTAL ဘဝကို LINE FOR အဆိုပါကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းစက်ရုံခေါင်မိုး။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 87943 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ကြက်မွေးမြူရိပ်သာလမ်း 26490 Tepebasi / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0(222) 224 00 00 / 4435-4436 -0(222) 225 50 60 - 225 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Lifeline စနစ် (TÜDEMSAŞ) 07 / 06 / 2018 တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC အောင်ဘဝကို Line System အလုပ်မှာ စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အောင် (TÜDEMSAŞ) ဘဝကို Line System ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 279473 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 1299-1300-1301 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik ihale@tudemsas.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကို web address ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့မှ gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်:6ကလောင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကဝယ်ဖို့ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် dampers (TÜVASAŞ) အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 20 / 07 / 2016 ဒါကြောင့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ရှော့အိတ်ဇောဗား၏TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု GCC မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ: 2016 / 270144 SUBJECT ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနှင့်စီးပွားရေး Entity နှင့် ပတ်သက်. လေလံအပိုဒ် 1- 1.1 သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကြောင်းရင်းများ။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Mithat Pasha Mah, အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ ။ အမှတ် 131, 54100 Adapazari / Sakarya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 90 264 2751660 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 90 264 2751679 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ info@tuvasas.com.t: အဆိုပါ hyersoy@tuvasas.com.t '' ဒေါက်တာ။ f) Related ယူနစ်: နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဒါရိုက်တာ-xnumx.istekli ၏ဝယ်ယူမှုဦးစီးဌာနနုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဌာနခွဲကနေရရှိနိုင်ကြသည်။ အပိုဒ် 1.2- နု၏နူးညံ့သောဘာသာရပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်; ...
ဟိုက်ဒရောလစ် Shock ကိုစုပ်ယူဒေါင်လိုက်, အလျားလိုက် Transverse Damper Alınacaktır 16 / 04 / 2018 Hydraulic Shock ကိုစုပ်ယူဒေါင်လိုက်, အလျားလိုက် Transverse Damper Alınacaktırနူးညံ့ FILE ကို NUMBER ကို၏TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု: 20180188 အဆိုပါ IRB မှတ်ပုံတင်နံပါတ်: 2018 / 187455 1- အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးက) အမည်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု - Mithatpasa Mah ။ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ အမှတ် 131, 54100 Adapazari / Sakarya / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 264 2751660 - 264 2751679 ဂ) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ: သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ info@tuvasas.com.t: hyersoy@tuvasas.com.t2-BIDDING Thread ဖြစ်ပါသည် က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်ကိုဖန်ဆင်း: - ပွင့်လင်းတင်ဒါ - ကုန်စည်ဝယ်ယူ4ကလောင်ခ) တည်နေရာ: () ပြည်တွင်းလေလံများအတွက်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု-Mithatpaşa Adapazari / Sakarya / တူရကီ (နိုင်ငံခြားလေလံများအတွက်): နိုင်ငံခြားရေးလေလံအဆိုပြုချက်ကို (Incoterms 2010 '' တစ်ဦး ...
တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က (TÜDEMSAŞ) - wheel ကစားဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်
နူးညံ့သော ANNOUNCEMENT: TÜDEMSAŞ FALNS Wagon BODY RECOVERY တင်ဒါ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TÜDEMSAŞ 21 ကလောင် pin ကိုများအတွက်ဝယ်ယူရေးတွေ့မြင်